vivo Y53s | vivo Myanmar
၆.၅၈” လက်မအရွယ် FHD+ Display
Y53s တွင် ၆.၅၈ လက်မ FHD+ (2408 × 1080) resolution နှင့် P3 color gamut ပါဝင်သောကြောင့် ဗီဒီယိုနှင့်ဂိမ်းနှစ်ခုလုံးအတွက် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်သည် မျက်လုံးထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် အန္တရာယ်ရှိသော အပြာရောင်အလင်းတန်းများကိုလည်း စစ်ထုတ်ပေးသည်။
လင်းလက်တောက်ပသော 3D အရောင်ကာလာများ
သက်တံကို သင့်လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် nano-grade optical coating သည် သင်၏ဖုန်းနောက်ကျောတွင် အရောင်အပြည့်ကို လိမ်းခြယ်ပေးထားသည်။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကဲ့သို့ လှပသောအရောင်များ တောက်ပလာပြီး အလင်း၌ မည်သို့မည်ပုံ ပြောင်းလဲသွားသည်ကို မြင်ကြည့်ပါ။
နက်ရှိုင်းသောသမုဒ္ဒရာ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစွမ်းအားကို ခံစားပါ။ လှိုင်းခတ်သံများနှင့်ဆင်တူသောအလင်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ခံစားကြည့်ပါ၊ သင့်ကို တိတ်ဆိတ်သော တီးတိုးစကားသံများတွင် လွှမ်းခြုံထားစေပါသည်။
vivo ၏ ဘေးဘက်လက်ဗွေဒီဇိုင်းသည် ပါဝါခလုတ်ကို လက်ဗွေစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ လော့ဖြည်ပြီး display ဖွင့်ခြင်းကို တချိန်တည်း ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် Y53s ကို ပိုမိုခမ်းနားထည်ဝါတင့်တယ်သွားစေသလို သုံးစွဲသူတွေကို ထပ်မံအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုအောင်ပင် ပြည့်စုံသွားစေသည်။ လော့ခ်ဖြည်ရန် အချိန် * ဝ.၂၄ စက္ကန့် သည် side-mounted fingerprint scanner အသုံးပြုပြီး လော့ခ်ဖွင့်သော ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး vivo စမ်းသပ်ခန်းများမှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ လော့ခ်ဖွင့်ချိန်သည် မျက်နှာပြင်ဖွင့်ချိန် ဝ.၂၄ စက္ကန့်၊ မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန် ဝ.၃၁ စက္ကန့် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ 7.
ဝ.၂၄ စက္ကန့်သာ ကြာမြင့်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Face Wake နှင့်ဆိုပါက သင့်ဖုန်းကို လော့ဖြည်ဖို့ အချိန်ပို တစ်စက္ကန့်တောင် ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။
8GB 8 Y53s တွင် ၎င်း၏မန်မိုရီလှည့်ကွက်တစ်ခု ရှိသည်။ သင်၏ idle ROM space ကို 4GB9အထိ RAM အဖြစ် သုံးနိုင်ပြီး အပ်ပလီကေးရှင်းများအကြားကူးပြောင်းရာတွင် ပိုမိုချောမွေ့စေနိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံး အပ်ပလီကေးရှင်းများ အားလုံးကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီး ခက်ခဲကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ run လိုက်ပါ။.
Y53s တွင် ကြီးမားသော 128GB 8 သိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် memory 1TB 10 အထိတိုးချဲ့နိုင်သော သုံးကဒ်ထိုး တစ်ခု ပါဝင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဒရမ်မာစီးရီးကို အရူးအမူး ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများကို စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ ဘဝကို အပြည့်အဝ နေထိုင်ခံစားလိုက်ပါ။.
33W FlashCharge နည်းပညာ
33W FlashCharge 11, ဖြင့် Y53s သည် ၁၅ မိနစ်အတွင်း လုံလောက်သော အားကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီး နံနက်စောစော သင်အိမ်မှ အလျင်စလိုထွက်ရန် လိုအပ်သည့်အခါမျိုးတွင်လည်း အသုံးဝင်သည်။ ၄၁ မိနစ်အတွင်း ၇၀% အထိ အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီး 18W Fast Charge ထက် ၃၇% ပိုမြန်မည်ဖြစ်သည်။ 12.
စူပါ 5000mAh (TYP) 13 ဘက်ထရီကြီးနှင့် AI စနစ်ဖြင့်မောင်းနှင်ထားသော စွမ်းအင်ချွေတာသော နည်းပညာတို့ဖြင့် သင်၏ Y53s ကို တစ်ကြိမ်အားအပြည့်သွင်းရုံဖြင့် ၁၄.၃ နာရီ 14 အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း (သို့) ၇.၀၅ နာရီကြာ ဂိမ်းအကြီးများကို ကစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 15 Reverse charging feature သည် သင်အပြင်သွားသည့်အခါ သင်၏အခြားကိရိယာများကိုလည်း အသုံးတည့်စေသည်။ 16.
စူပါ 5000mAh (TYP) 13ဘက်ထရီကြီးနှင့် AI စနစ်ဖြင့်မောင်းနှင်ထားသော စွမ်းအင်ချွေတာသော နည်းပညာတို့ဖြင့် သင်၏ Y53s ကို တစ်ကြိမ်အားအပြည့်သွင်းရုံဖြင့် ၁၄.၃ နာရီ 14 အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း (သို့) ၇.၀၅ နာရီကြာ ဂိမ်းအကြီးများကို ကစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 15 Reverse charging feature သည် သင်အပြင်သွားသည့်အခါ သင်၏အခြားကိရိယာများကိုလည်း အသုံးတည့်စေသည်။ 16.
64MP 17 super high-definition ပင်မအနောက်ကင်မရာသည် စျေးနှုန်းတူဖုန်းများအတွက် စံချိန်သစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ပုံတစ်ပုံစီ၌ ၆၄ မီလီယံ pixels ဖြင့် အပြစ်အနာအဆာမရှိသော ကြည်လင်မှုနှင့်အတူ ဆံချည်မျှင်တစ်ချောင်းမှ မျက်တောင်မျှင်တစ်ခုအထိ အသေးစိတ်မြင်နိုင်သည်။.
2MP Bokeh ကင်မရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မွမ်းမံထားသော bokeh algorithm ကြောင့် တိကျပြီးခေတ်မီသောရလဒ်များကို ပေးသည်။ ယခု portraits ပုံများသည် ပိုမိုအသက်ဝင်လာရုံသာမက ပိုကြီးသော depth ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးသေးသည်။.
အနုစိတ်အလှကမ္ဘာကို ဖွေရှာဖို့ Super Macro Camera
၄ စင်တီမီတာခန့် အနီးဆွဲပြီး ဆုံချက်ကျကျနှင့် သင်မျက်စိရှေ့တွင်ပင်ရှိသော ဖုံးကွယ်ထားသည့် ကျောက်မျက်များအပြည့်နှင့် သေးငယ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာငယ်လေးများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။.
16MP HD ရှေ့ကင်မရာတစ်လုံးဖြင့် မဖြစ်နိုင်မှုကို ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော တောက်ပစွာ ကြည်လင်နေသည့်ဆယ်ဖီပုံများနှင့် မတူခြားနားမှုကို မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်မှောင်မှောင်၊ လင်းလင်း အရေးမကြီးပါဘူး၊ သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို အချိန်တိုင်း ပြသလိုက်ပါ။.
အနောက်ကင်မရာတွင် Super Night Mode ကို multi-frame denoising ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးထားသောကြောင့် ညမှောင်နေသည့်တိုင် ကောင်းမွန်သော ညမြင်ကွင်းများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်သည်။ ကြယ်စင်ည၏အလှကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးရန် တစ်ချက်ထိရုံသာ လိုသည်။.
Y53s ရှိ Super Night Selfie သည် Selfie Softlight Band နှင့် အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင် noise cancellation algorithm ကို အသုံးပြုထားသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုမှုများတွင် သင်၏မျက်နှာပေါ် အလင်းရောင်ကျရောက်သည်မှာ မြတ်နိုးဖွယ် ဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေသော အလင်းရောင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်သို့ အလိုအလျောက်ညှိပေးသောကြောင့် ကြောက်လန့်ဖွယ် flash နှင့် မညီညာသောအသားအရေအရောင်များအတွက် စိတ်ပူရန်လိုအပ်မည် မဟုတ်ပါ။.
မည်သည့်ဆက်တင်အတွက်မဆို တီထွင်ထားသော Y53s ၏အနောက်ကင်မရာ Electronic Image Stabilization (EIS) နည်းပညာသည် တုန်ခါလှုပ်ရှားမှုများအတွက် အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ပေးသော algorithm တစ်ခုက ထပ်မံပံ့ပိုးပေးသည့် ဘောင်တစ်ခုစီကို ဖြတ်တောက်ထိန်းညှိပေးသည်။ ပြေးရင်း၊ စက်ဘီးစီးရင်း၊ သို့မဟုတ် အဝေးမြင်ကွင်းများကို ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ပါ။ အလွန်တည်ငြိမ်သောဗီဒီယိုများကို အချိန်တိုင်း ခံစားလိုက်ပါ။.
PDAF နည်းပညာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနောက်ကင်မရာသည် ရွေ့လျားနေသောအရာများကို ခြေရာခံရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အဆက်မပြတ် မျက်လုံးများပေါ်တွင် ဆုံချက်ကို ချိန်ပေးထားသည်။ ယင်းအစွမ်းထက်နည်းပညာသည် သင့်ကိုဆုံချက်များအား လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ချောမွေ့စွာပြောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်များကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးဖို့ အများကြီး ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်လုပ်ရန်ကျန်သည်မှာ သင်၏ဓာတ်ပုံကို အကောင်းဆုံးဘောင်ခတ်ရန် (သို့မဟုတ်) ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ပန်ကို ပေါ်လွင်အောင်လုပ်ရန်သာ ဖြစ်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် Multi-Turbo 5.0 သည် ဂိမ်းများတွင် ထစ်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းကို လျှော့ချရန် core မြင်ကွင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အာရုံစိုက်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် CPU နှင့် အတွင်းသိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များ ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းကို ဦးစားပေးပြီး _ အထူးသဖြင့်နောက်ခံတွင် အပ်ပလီကေးရှင်းများစွာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ဖြစ်သည်။.
Esports Mode အသစ်ပါဝင်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Ultra Game Mode သည် နေ့စဉ်ဂိမ်းကစားခြင်းကို အဆုံးစွန်ထိ အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် customized audio effects များသည် သင့်အား ဝေးလံသောကမ္ဘာများနှင့် လက်တွေ့စစ်မြေပြင်များသို့ ပို့ဆောင်ရန် ကူညီသည်။.
Custom Watermark (ကိုယ်ပိုင် ရေစာအမှတ်အသား)
ဓာတ်ပုံတွေပေါ်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် ရေစာအမှတ်အသားကို ဖန်တီးလိုက်ပါ၊ ဒါက သင့်ပုံစံအနေအထားကို ပြသနိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။.
AI Editor သည် သင့်အား စတိုင်ကျလှပသော ဗွီဒီယိုများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်မျှဝေ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ AI algorithm သည် သင်၏ဗီဒီယိုဖိုင်အတွင်းမျက်နှာများနှင့် မြင်ကွင်းနှစ်ခုလုံးကို ခွဲခြားပြပြီး ၎င်းတို့အား vlog ပုံစံအတွင်း၌ ရစ်လုံးအသစ်တစ်ခုအဖြစ် ခွဲလိုက်သည်။.
ထိန်းချုပ်မှုစင်တာရှိ ခလုတ်များအားလုံးကို ၎င်းတို့အား အကြိမ်ရေမည်မျှ အသုံးပြုသည်နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေသော နည်းလမ်းဖြင့် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးသော အလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်သာ ဖြစ်နေပါစေ။.
iManager ရှိ Space Cleanup tool သည် cache နှင့်အမှိုက်များကို ရှာဖွေပြီး ၎င်းတို့ကို တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ဖုန်း၌ရှုပ်ထွေးမှုများအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်ကူညီပေးမည့် ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အထူးရည်ရွယ်ထားသည့် ကိရိယာများကိုလည်း ပေးသည်။.
1. ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာပါက ထောင့်မှန်ခံအပြည့် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ၆.၅၈ လက်မရှိသည်။ အမှန်တကယ် display ဧရိယာသည် အနည်းငယ် သေးငယ်သည်။.
2. ပြသထားသောကုန်ပစ္စည်းပုံများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရည်ညွှန်းရန်သာဖြစ်သည်၊ ဖန်သားပြင်ပြသထားသော ပုံများသည် ပုံတူဖြစ်ပြီး သရုပ်ပြရန်သာ ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်များကို စံအဖြစ်ယူပါ။.
3. အချက်အလက်အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် စမ်းသပ်အချက်အလက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆော့ဝဲဗားရှင်း၊ သီးခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေနှင့် ဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ပြထားသော နှိုင်းယှဉ်မှုများအားလုံးသည် vivo ထုတ်ကုန်များကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။.
4. လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ (သို့) ကုန်ပစ္စည်း၏အစိတ်အပိုင်းများသည် ပေးသွင်းသူအပြောင်းအလဲနှင့် ကွဲပြားသောထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များကြောင့် ကွဲပြားနိုင်သည်၊ vivo သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိဖော်ပြချက်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးမပြုမီ ဤစာမျက်နှာကို သေချာဖတ်ပါ။.
5. pixel တန်ဖိုးသည် ကင်မရာပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။.
7. ဝ.၂၄ စက္ကန့် သည် side-mounted fingerprint scanner အသုံးပြုပြီး လော့ခ်ဖွင့်သော ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး vivo စမ်းသပ်ခန်းများမှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ လော့ခ်ဖွင့်ချိန်သည် မျက်နှာပြင်ဖွင့်ချိန် ဝ.၂၄ စက္ကန့်၊ မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန် ဝ.၃၁ စက္ကန့် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။.
8. အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော RAM/ROM သည် operating system နှင့် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော အပ်ပလီကေးရှင်းများ သိုလှောင်မှုကြောင့်လျော့နည်းသည်။.
10. 1TB အထိ မန်မိုရီတိုးချဲ့မှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Micro SD ကဒ်ကို သီးခြားဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။.
11. Y53s တွင် vivo standard charger (FlashCharge adapter 11V/3A) တပ်ဆင်ထားပြီး 33W အထိ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းသော အားသည် အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအရ ထိန်းညှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုမှုကိုသာ ဦးတည်စေလိုပါသည်။.
12. အားသွင်းဒေတာကို vivo ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှုများမှ ရရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်: ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၂၅ ℃± ၁ ℃။ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ - ဘက်ထရီ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စံ vivo အားသွင်းကြိုးနှင့်မျက်နှာပြင် ပိတ်ထားခြင်း။ စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၊ တာရှည်ဘက်ထရီအသုံးခံခြင်းနှင့် အခြားအချက်များပေါ် မူတည်၍ လက်တွေ့ဒေတာများ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
13. ပုံမှန်ဘက်ထရီပမာဏသည် 5000 mAh ဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီပမာဏသည် 4880mAh ဖြစ်သည်။
14. အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလွှင့်သည့်အချိန် : Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd/m²မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအပြည့်တို့ဖြင့် Y53s သည် YouTube ဗီဒီယိုများကို ၁၄.၃ နာရီအထိ ဆက်တိုက်လွှင့်နိုင်သည်။ တချို့သောအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ်လွှင့်ချိန်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။.
15. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန် : Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd/m² မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအပြည့်တို့ဖြင့် Y53s သည် PUBG ကို ပုံမှန်ဂိမ်းချိန် ၇.၀၅ နာရီအထိ ဆက်တိုက်ကစားနိုင်သည်။ တချို့သောအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ အမှန်တကယ်ကစားချိန်သည် ကွဲပြားနိုင်သည်။.
16. Reverse charging အတွက် OTG ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခု သီးခြားဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။. ၎င်းကိုအသုံးမပြုမီ ဆက်တင်ထဲတွင် OTG လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားရမည်။.
17. အဓိကကင်မရာ၏ GW3 ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာသည် ၆၄ သန်းသော physical pixel points များနှင့် ပုံမှန်အားဖြင့် 4-in-one 16MP ကိုထုတ်ပေးပြီး 64MP ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။.